Amalunga enhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eyeZimbabwe Hospitals Doctors Association-ZHDA abethe gwaqa esibhedlela seMpilo koBulawayo kanye leParirenyatwa Hospital eHarare, ethokoza ndawonye ngokutholakala komunye wabo uDokotela Peter Magombeyi ngoLwesine yena obikwa ubethunjiwe.
Embikweni ewethule ngoLwesihlanu, inhlanganiso le, ithi ibonga bonke odokotela elizweni, kanye laphandle kwalo ngokubasekela ngesikhathi udokotela magombeyi engabonakali. Itshayele ihlombe njalo abasebenza kungatsha ezehlukeneyo kwezempilakahle, amagqwetha, kanye labezokholo abaxhasane layo.
Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, amele udokotela magombeyi athe azakhuluma lalumsakazo ngemva kokudingisisa kwamapholisa ngaloludaba.
IStudio 7 ixoxe lodokotela Magombeyi ngoLwesine esanda ukubonakala, esithi use Nyabira.
Ukucubungula loludaba, sixoxe loMnu. Max Mnkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, njalo owayekubutho lesizwe eleZimbabwe National Army kanye leleZIPRA.